”ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် ရဲအယောင်ဆောင် ကာ စည်းကမ်းပျက် ဆိုင် ကယ်များ ဖမ်းဆီးနေ သူ ၄ ဦး ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ” …. – Shwewiki.com
”ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် ရဲအယောင်ဆောင် ကာ စည်းကမ်းပျက် ဆိုင် ကယ်များ ဖမ်းဆီးနေ သူ ၄ ဦး ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ” ….
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် စည်းကမ်းပျက်ဆိုင်ကယ်များ လိုက်လံဖမ်းဆီးနေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောင်ဆောင်ထားသူ ၄ ဦး လက်နက် များနှင့်အတူ ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် သာဓုကန်စက်မှုဇုန် ပတ်လမ်းအနီး၌ ရဲယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်၍ စည်းကမ်းပျက်ဆိုင်ကယ်များအား လိုက်လံဖမ်းဆီး နေကြောင်း သတင်းအရ လှော်ကားနယ်မြေရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဦးစီးသည့်အဖွဲ့က သွားရောက်စစ်ဆေးစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့အယောင်ဆောင်သူ အမျိုးသား ၄ ဦးမှာ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် ထွက်ပြေးသွားသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့မှလိုက်လံဖမ်းဆီးစဉ် မင်းခန့်ဇော်(၁၉)နှစ်နှင့် ဘိုဘိုဝင်း(ခ)စည်သူ(၁၉)နှစ်၊ မင်းခန့်ဇော်(၁၉)နှစ်နှင့် ဘိုဘိုဝင်း(ခ)စည်သူ(၁၉)နှစ်တို့ ၄ ဦးအား နံပါတ်မပါသည့် ဆိုင်ကယ် ၂ စီးနှင့်အတူ အမှတ် (၉)ရပ်ကွက် ငုရွှေဝါပန်းခြံအတွင်း၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူများအားစစ်ဆေးရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ရဲတပ်သားအဆင့်တံဆိပ်ပါ နက်ပြာရောင် ယူနီဖောင်း အကျႌလက်တိုအား ဝတ်ဆင် ထားသူမှာ ထွန်းမျိုးကျော်(ခ)ထော်ကြီးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ခါးကြားမှ အရိုး/အသွား ၁၁ လက်မခန့်ရှိ ဓားဦးချွန် ၁ ချောင်းအားလည်းကောင်း၊ လင်းလင်းဖြိုး၏ ခါးကြားမှ အရိုး/အသွား ၉ လက်မ ခန့်ရှိ ဓားဦးချွန် ၁ ချောင်းအားလည်းကောင်း၊ မင်းခန့်ဇော်၏ ခါးကြားမှ အရိုး/အသွား ၁၅ လက်မခန့်ရှိ ဓားဦးချွန် ၁ ချောင်းအားလည်းကောင်း၊ ဘိုဘိုဝင်း(ခ)စည်သူ၏ ခါးကြားမှ အရိုး/အသွား ၁၁ လက်မခန့်ရှိ ထိပ်ဦးချွန် ဆန်ထိုးပိုက် ၁ ချောင်းတို့အားလည်းကောင်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
၎င်းတို့ ၄ ဦးအား လှော်ကားနယ်မြေရဲစခန်းတွင် (ပ) ၁၉၃၁/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၇၀ (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအယောင်ဆောင်မှု)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လက်နက်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉(င) ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ဥပဒေပုဒ်မ ၈/၁၀ ဖြင့်လည်းကောင်း အမှုဖွင့်စစ် ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အ သက်(၁၇)နှစ်အရွယ် လေး”နဲ့ ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ခံနေရတဲ့” အေးမြဖြူ ”……
လေယာ ဉ်မှုး ကြီး ဦးအောင် ပို ရေး တဲ့ စာ…..